Ve ny Online Social Profiles handringana ny Fifandraisana?
amin'ny KC Morgan
Last nohavaozina: Jan. 05 2018 | 3 min namaky
Fantatrao ianao ka tsy ny olona ihany no obsessively mikaroka ny daty ao amin'ny haino aman-jery sosialy sy ny fikarohana toerana, ao anatin'ny ezaka mba mihady ny maloto, marina? Fantatrao ve hoe inona ny Internet dian-tongotra no hoe ny anao ny hery anaty fifandraisana?
The Friend Taham
Fotsiny ny saina mena maro azonao angamba ho mitaiza amin'ny namanao sy ny mpanara-dia lisitra? Mety mihoatra noho ny hevitrao. Ny iray amin'ireo mora indrindra tapa-baovao momba anao, farafaharatsiny rehefa ny Internet, dia iza ny namanao dia. Mety ho daty mety ho nijery ny lisitra sy ny namorona hevitra matanjaka tsara tarehy ny sasany.
Raha mandinika ny lisitry ny namana haingana, kely iray vaovao ho hifantoka tanteraka avy hatrany: ny tahan'ny olona ny vehivavy ao amin'ny lisitra. Vehivavy izay manana namana lehilahy maro mety ho mampiahotra izany ny mety ho daty. Izy ireo dia handeha ho any manontany tena izay ry zalahy ireo rehetra ireo, izay ny fifandraisana dia, ary mety hahatsiaro nandrahona. Toy izany koa ny vehivavy mandeha izay lehilahy mijery avy ao amin'ny haino aman-jery sosialy. Rehefa mahita betsaka ny vehivavy ao amin'ny lisitra, izy ireo dia handeha ho any ho liana sy malina kokoa.
Hampahafantatra ny Info ianao
Haino aman-jery ara-tsosialy dia fomba tsara mba hifandraisana ary mety hifandray amin'ny toetra tianao, fa izay koa feno lohahevitra mafana-bokotra. Maro ny olona mampiasa haino aman-jery sosialy tranonkala mba hanaraka ny ara-politika sy ara-tsosialy izay manan-danja antony ho azy ireo. Misy mihitsy aza mampiasa izany ho toy ny soapbox mba tout ny biby mahaliana. Hevitra mafy dia mety ho tena eny-mametraka ny mety ho daty, izay tsy miombon-kevitra amin'ny fony manontolo amin'ny olana rehetra.
Dia tsy tena tsara ny mahita vady izay manaiky ny hevitrao amin'ny olana tsirairay, ary ny tsara kokoa hatrany mba saina mivelatra. Rehefa be dia be an'ilay ho vadiny mantsy amin'ny tombontsoa ara-politika, afaka ho nitodika azy tokoa, ary nanosika azy ireo hiala eo anatrehanao dia manana fahafahana hahita marimaritra iraisana.
Izay Nirin'ny ianao ho
Ianareo roa efa niaraka nandritra ny herinandro, ary tsy mandeha tsara. Fa eo anatrehanao ny namany nibango amin'ny alalan'ny lisitra sy miezaka be ny rehetra ny fianakaviany sy ny olom-pantany amin'ny fangatahana, mieritreritra. Fa tsy mety ny namana ny iray tam-po, ray aman-dreny sy ny sekoly ambaratonga faharoa buddies mazava raha tsy mangataka fahazoan-dalana hanao izany.
Ve izany ao ambadiky ny vadinao, na ny miverina raha tsy ny fifanarahana, ary rivotra ka afaka mijery tahaka ny Stalker. Na dia ny eritreritra ny hanao zavatra tanteraka tsy manan-tsiny, Izany dia midika hoe handeha hijery raha toa ka miahiahy ianao tampoka friending ny namana rehetra. Ilay olona miaraka aminao dia hahatsapa fa miezaka ianao mba levitra azy, ary mety hanangana matoky isan-karazany olana.
Ny Photos ianao Share
Ianao dieted ririnina rehetra, ary ankehitriny ianareo mitady mahagaga amin'izany marika-swimsuit vaovao ... fa tsy midika tokony hizara izany amin'izao tontolo izao. Ny zavatra ianao hanambara amin'ny ny sary mba ho manome eny diso ny hevitrao momba izay karazana olona ianao. Asehoy eny be dia be ny hoditra, sy ny mety ho saro-piaro mety vady. Mety tsy hanaja azy intsony izy ireo ho anao. Izy ireo dia afaka mampiseho ny sary olona hafa, na re-hamoaka azy ireo ary mizara izany amin 'izao tontolo izao, raha ianao ihany no vonona ny hizara ny pics amin'ny vitsivitsy voafantina.
Rehefa mametraka zavatra ao amin'ny Internet, na iza na iza afaka ny ho tonga izany, ary ny olona rehetra dia mamorona ny heviny momba azy io. Tsarovy fa eo anatrehanao mampiseho eny fa swimsuit tifitra.
The politika Game
Tandremo amin'ny fomba eo anatrehan'Andriamanitra ho olona tao amin'ny tambajotra sosialy. Tsy te-haneho be loatra. Izany sary goofy aminareo izay tianao ianao izay nandeha avy teo amin'ny farafara lehibe dia mety miteraka fahatsiarovana ho anareo, fa mety ho daty mety ho lehibe saina mena. Mety tsy hahazo ny fahafahana mba hanazavana fa ny fihetsika toy izany dia tsara ny tany aloha.
Asehoy ny toetra anaty aterineto, fa mampiseho ny voasivana dikan-. Te-hahita vady izay tia anareo anareo tena dia, ary hanana fahafahana maro ny hanambara ny maro sosona. Tsy voatery maika mba hampiseho ny lafiny rehetra eny amin'ny Internet.